DG Puntland oo sheegtay in Boosaaso ay ku qabatay hub. - Axadle | Wararka Africa
DG Puntland oo sheegtay in Boosaaso ay ku qabatay hub. –
By Newsroom	 On Nov 22, 2020
Howlgal qorsheysan oo uu hoggaaminayay Taliyaha qaybta Gobolka Bari ee G/Sare Xuseen Cali maxamuud ayaa lagu soo qabtay hub si sharci darro ah loogu heystay qaybo kamid ah Magaalada Boosaaso.
Saraakiisha Ciidamada ayaa sheegay in hubkaan looga qayb qaadanayay falalka amni darro ee xarunta Ganacsiga DG Puntland ee Boosaaso, balse xog ay ka heleyn dadka deegaanka ay suuragelisay in ay soo qabtaan.
Taliyaha qaybta Booliiska Gobolka Bari ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno la xiriira shaqsiyaadka laga soo qabtay goobaha laga soo qaaday hubka, balse waxa uu shaaciyay in uu sii socon doono howlgalka ilaa amniga Boosaaso laga adkeyna.
Ciidamada ammaanka DG Puntland ayaa howlgalka ay ka sameeyeen Xaafadaha Boosaaso ku baaray qaar kamid ah Guryaha ku yaalla Magaaladaas, Gawaarida Shacabka & kuwa shaqsiyaadka ay wataan.
Ujeedka ugu weyn ee howlgallada Boosaaso ayaa ah adkeyna amniga kahor inta aysan tagin Ergada soo dooraneysa kuraasta Baarlamaanka Soomaaliya ee la shaaciyay in lagu soo dooranayo Xarunta Gobolka Bari.
Welwelka ugu weyn ee sababay in la kordhiyo howlgalada Magaalada Boosaaso ayaa ah dilalka, weerarada sardhigyada & guryaha mas’uuliyiinta oo inta badan mas’uuliyadda falalkaas ay sheegteen Al-Shabaab & Daacish oo xarumo ku leh Dhulka Buuraleyda ah ee Magaalada Kulaala.
Waa Maxay Sababta Ay Ciyaaryahanadda Serie A Sannad Walba